amin'izato lokony lalao
iray hafa fiotazam-boalobok'i lalao – zana-tsipìka. Dia niseho teo amin'ny miaramila, ary tsy ela dia niely nanerana izao tontolo izao, dia izao mba ho azo maimaim-poana amin'ny aterineto. Ankoatry ny mahazatra dikan kilasika, dia efa namboarinay ny fahafahana hilalao ny lalao zana-tsipìka amin'ny soratra vaovao. Raha ny fandehany fa tsy afaka manary sabatra kely fotsiny ao nilahatra ny fiara sy ny mampiasa izay fomba rehetra misy. Ohatra, ny Yeti vorondrano manomboka manao faribolana – fa ny fomba, ary ianao tsy afaka ny ho gaga. Tonga mpandefa zana-tsipìka sy ny ny dikan-– archery zana-tsipìka, miezaka ny namely ny lasibatra, ary raha ny marina, dia fialam-boly Moyen Âge ao amin'ny fifaninanana.
Lalao Amin'izato lokony tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra amin'izato lokony lalao
Lefona amin'ny olona
Zana-tsipìka sy ny labiera
Mamo sy mandoa
Party ny zana-tsipìka
Zana-tsipìka ho an'ny zana-tsipika mainty
Lefona ao anaty ala
Manoroha ny zana-tsipìka
Zana-tsipìka - 3
Zana-tsipìka Version 1
Zana-tsipìka Version 2
Zana-tsipìka ny fitiavana
Ny tanjona - USA
Zana-tsipìka amin'ny hatsaran-tarehy
Fa ny vorona
Zana-tsipìka - 501 hevitra
Maro loko zana-tsipika
Amin'izato lokony Master
Zana-tsipìka hamely matavy ny olona
Lalao Circus Dart
Hot Girl Darts Hot
Trollhunters Darts Gnome
Darts Hot Girl
Manerana izao tontolo izao zana-tsipika
Speed ​​amin'izato lokony
Farany amin'izato lokony lalao
Ny lalao ny zana-tsipìka Cowboy saloons nifindra monina ny solosaina Monitors ary nomeny fahafahana haneho ny marina sy ho antsika
Ny kisendrasendra tarehin'ny amin'izato lokony lalao
Fantatrao ve ny fomba mijery zana-tsipika voalohany? Dia vaky ambany ny barika izay nanipy antsy ny miaramila sy ny bayonets, antsy ary ny fampiatoana mandritra ny fiatoana any amin'ny ady. Mpiady voalohany niezaka fotsiny mba hahatonga ny foto-kevitra ny maranitra tapa-kazo tao an-hazo, fa raha voan'ny matetika ambonin'ny kitay ho any amin'ny lafiny roa ny taratra niakatra fitsipika tsotra sasany ho fanangonana hevitra.
Tamin'ny 1896, ny mpandrafitra atao hoe Brian Hamlin Lancashire nieritreritra ny marika, izay namorona ny fototry ny lasibatra ny manaraka. Ao amin'ny faritra samy hafa ary ankehitriny mampiasa dikan-samihafa ny markup tononiny ny fahasamihafana ao amin'ny fitsipika.
Araka ny voalaza ny lalao ny zana-tsipìka, toa tsy nahy ny saloon ao amin'ny Wild Andrefana. Cowboys, dia afaka mampiofana marina, izay tena zava-dehibe tamin'izany fotoana izany ny fahoriana. Mamo toaka lava volo ry zalahy manapa-kevitra ny miloka miaraka amin'ny fanampian'ny lalao ity, ary na dia nampiseho ny fahamboniana. Mitoraka amin'ny rivotra tokotanin-tsambo ny karatra, ny ambony indrindra Chic afaka hahita sary ao amin'ny zava-nitranga, ary ny zana-tsipìka pinned ny lasibatra. Io fitaka matetika ampiasaina ao amin'ny filma, westerns, mba hanamafisana ny fahaizany mamikitra sy ny fametrahana mazava tsara ny mahery fo, mba hanandratra azy ho ambony noho ny tarika ny mpanao heloka bevava. Teo amin'ny rindrina ao an-efitra tanora Amerikana tamin'ny taonjato saika nahantona foana zana-tsipìka. Ny olona nasainy entanao nateriny ho telo amin'izato lokony marina namely ny bull's-maso sy handray ny loka. Ny analogue ny lokony azo hita tao amin'ny cirque. Amin'izato lokony nanampi-maso ary manipy antsy ho lasibatra lehibe, ho izay mifatotra ny mpanampy. Ary ny manasarotra ny asa, ny lasibatra nanomboka rotate.
Ny faneva lasibatra dia:
Apple – afovoan-kendrena
Green saha manodidina ny paoma
Ny peratra tery ivelany
Ny tery anaty peratra
mainty sy fotsy sehatra
Ny fisehon'ny eo amoron'ny faharoa-polo ao an-tampon'ny
avy ireo mpankafy marina hitombo dartsmen izay mandray anjara aminà fifanintsanana, fahitalavitra.
Asehoy ahy ny marina nitifitra amin'ny lalao an-tserasera ny zana-tsipìka
Fa isika, izany karazana vakansy bebe kokoa tahaka ny tena zana-tsipika lalao an-tserasera. Dia mahasarika safidy isan-karazany sy ny mety ny virtoaly toerana, satria dia afaka miala ao amin'ny mahazatra fitsaratsaram-poana, ka tsy manipy lefona, ary misy zavatra ao amin'ny voatondro zavatra.
Ny mamo piraty miovaova amin'ny tongony, ary avy eo misy ny fiantraikany teo amin'ilay sambofiara manelingelina amin'ny mifantoka tokotanin-tsambo. Fa tsy maintsy manaporofo fa manana tapaka ny tànany sy ny maso 'ny fomba henjana very. Ampio ny mahantra Guy mba hifantoka amin'ny kendrena sy handefa zana-tsipìka ho amin'ny ho lasibatra mitora marina.
Ao amin'ny vatana, dia ilaina ny hahita ny toerana ara-jeografika eo amin'ny sarintany sy hanipy azy amin'izato lokony. Indray mandeha koa, eo anoloan'ny ianareo mpanao politika, dia afaka hiatrika ireo noho ny fanampian'ny maranitra tendron'ny ravin fanjaitra. Mampidi-doza mpampianatra matematika dia afaka manipy zana-tsipìka – Ity misy tantara an-tsary dikan-tenin'ny kilalao. Amin'ny fitohizan'ny ny fahafahana hilalao zana-tsipìka amin'ny aterineto, lasa voafonja tamin'ny fotoana ranomandry ny mandrakizay. Eto dia ny lehibe indrindra mpampijaly kely Tendrontany Avaratra – Yeti. Nanintona ny mijoalajoala fanakanana ny ranomandry amin'ny ampinga lehibe, fa kosa mampiasa zana-tsipìka Penguins.
fanohizana ny foto-kevitra, dia manasa anao ho any amin'ny cirque, fa tsy ny andraikitry ny mpijery, sy ny antsy thrower. Io isa io dia efa voalaza etsy ambony, fa ankehitriny dia anjaranareo ny hanipy maranitra zavatra amin'ny ho lasibatra.
Mifidiana azo zana-tsipika na mahazatra dika amin'ny tantara tany am-boalohany. Hany ilainao dexterity indraindray, kely – herim-po, fa mandrakariva – Marina no tena toe-javatra na inona na inona dikan-mahafinaritra.